​२५ वर्षपछि नेपाललाई दश हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक
काठमाडौँ । सन् २०४० मा नेपाललाई १० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । ‘दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय विद्युत् सहयोग एवम् व्यापार’ शीर्षकमा उक्त बैंकले झन्डै तीन..
त्रिशूली ‘थ्री ए’ समस्यामा, सञ्चालक समितिमा निर्णय अल्झियो
काठमाडौँ । गोरखा भूकम्पका कारण नराम्ररी समस्यामा फसेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ जलविद्युत् आयोजनालाई पुनः कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा थप जटिलता पैदा भएको छ । कुल ६०..
​फाष्टट्रयाक आफै बनाउन सरकारले १५ अर्ब बजेट छुट्ट्याउने, अब भारतलाई नदिने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–तराई फाष्टट्रयाक बनाउन आगामी बजेटमा १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने भएको छ । सुरुमा ५ अर्ब छुट्याउने र अपुग भएमा रकमान्तर गरी १० अर्ब थप फाष्टट्रयाक बनाउनका लागि..
​भुकम्प र नाकाबन्दीले रोक्किएका आयोजना अघि बढ्यो, माथिल्लो सान्जेन र सान्जेन र माथिल्लो तामाकोसीको काम पनि सुरु,
रमेश लम्साल काठमाडौँ । गोरखा भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण निर्माण कार्य रोकिएका आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो सान्जेन र..
​लामो समयको प्रयासपछि भुमिगत प्रशारण लाईनबाट माडीमा विद्युत् परीक्षण सफल
चितवन । माडी नगरपालिकामा लामो समयको प्रयासपछि विद्युतीकरणका लागि सफल परीक्षण भएको छ । प्रसारण केन्द्रको शनिबार साँझ दुई वटा फिडरमा बत्ती बालेर परीक्षण गरिएको छ। चनौली माडी विद्युतीकरण आयोजनाका प्रमुख जगदीशचन्द्र..
​सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जामा सबै पुरानै, तराईमा पनि जलासययुक्त आयोजना बनाउने योजना
रमेश लम्साल काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनामा समावेश गरिएका विषय वस्तुलाई नै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर योजनालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ । दश वर्षमा दश..
​नेपालको जलविद्युत क्षमता कति हो ? पत्ता लगाउँदै सरकार
रमेश लम्साल काठमाडौँ । नेपालको जलविद्युत्को कुल क्षमता कति होला, सामान्य मान्छेले सजिलै उत्तर दिनसक्छ ८३ हजार मेगावाट। तपाइँ हामीले भन्दै र लेख्दै आएको उक्त क्षमता भने अनौपचारिक मात्रै रहेको पाइएको..
​ नेपालको ८६ प्रतिशत विद्युत लाइसेन्स भारतीयको हातमा
काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण नगरी लाइसेन्स होल्ड गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि भारतीय प्रवद्र्धक देखिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म ६ हजार २२ मेगावाट विद्युतका लागि लाइसेन्स जारी गरेकोमा भारतीय प्रवद्र्धकका..
​अपर मादी जलविद्युतको काम ८५ प्रतिशत सम्पन्न
काठमाडौं । कास्की जिल्लाको सिल्दुजुरे गाविसमा निर्माणाधीन अपर मादी जलविद्युत आयोजनाको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ । आयोजनाको काम अहिले द्रुतगतिमा अघि बढेको र यही रफ्तारमा काम भयो भने मङ्सिर महिनासम्ममा..
थापाखोला जलविद्युत आयोजना १३.२ मेगावाटको निर्माण ९० प्रतिशत सकियो
मुस्ताङ । मुस्ताङको टुकुचेमा निर्माणाधीन १३.२ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको अहिलेसम्म सम्पूर्ण काम ९० प्रतिशत पूरा भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको सुरुङमार्ग, विद्युत् गृह,..
स्थानीय विकासलाई आगामी वर्षका लागि ७४ अर्ब बजेट, सबै गाविसमा सडक पुग्ने
काठमाडौँ । संसद्को विकास समितिले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भइरहेका स्थानीय पूर्वाधारका योजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका लागि आगामी वर्षको बजेट विषयमा छलफल गर्न..
​पुनःनिर्माणमा खटिएका १३०० इन्जिनियर खुसी छन्
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । महोत्तरीका धर्मेन्द्रकुमार यादवलाई भारतको पटनामा शिक्षण पेसा छाडेर भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अभियानको सूचनाले प्राविधिक भई स्वदेश फर्किन प्रेरित गर्यो। प्राविधिक विषय पढेर स्वदेशमा भनेजस्तो रोजगारी नपाएर विदेशिएका यादवमा..
के भन्छन् पुनःनिर्माणमा खटिएका इन्जिनियर
काठमाडौँ । महोत्तरीका धर्मेन्द्रकुमार यादवलाई भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अभियानको सूचनाले भारतको पटनामा जारी शिक्षण पेसा छाडेर प्राविधिक भई स्वदेश फर्कन प्रेरित गर्योन। प्राविधिक विषय पढेर स्वदेशमा भनेजस्तो रोजगारी नपाएर विदेशिएका यादव..
काठमाडौ-तराई द्रुतमार्ग ५ वर्षभित्र बनाउन निर्देशन
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले काठमाडौ-तराईरमधेश द्रुतमार्ग ५ वर्षभित्र बनाउने गरी काम अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा। सुमित्रा अमात्य र भौतिक..
कालीगण्डकी सवस्टेसनका जग्गाधनीले ११ करोड ४० लाख मुआब्जा पाए
पर्वत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजना) को यहाँ निर्माण गर्न लागिएको सवस्टेसनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ। गत पुसमा जग्गाधनीलाई जग्गाको मुआब्जा..
टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको खुद मुनाफा ३८ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को तेस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफा ३८ दशमलव ०२ प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको..
​चार लेन सडक निर्माणको कार्य सुरु
कञ्चनपुर । कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरको ट्राफिक चौराहदेखि शिव मन्दिरसम्म चार लेन सडक निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ । ठेक्का प्रक्रियाद्वारा निर्माण भइरहेको सडकमा पहिलो चरणमा माटो भरान र ग्राभेलिङको कार्य भइरहेको..
​सोलु करिडोर प्रसारण लाइन विवादमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएको १ सय ३२ केभी क्षमताको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन विवादमा फसेको छ । आयोजनाको ठेकेदार छनोट प्रक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत हुँदै..
​आन्दोलनको चपेटामा परेको वीरगञ्जमा विकासको रौनकता, धमाधम सडक निर्माण थालियो
वीरगन्ज । जिल्लाको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण मानिएका सडक सञ्जाल निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य पर्सामा अभियानका रुपमा सुरु गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला विकास समिति..
​सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का विवाद, प्राधिकरण १ अर्ब ३८ करोड हर्जनामा फस्दै
रमेश लम्साल काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वस्तुनिष्ठ निर्णय नगर्दा सोलु करिडोर प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा पूरा नहुने भएको छ । प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन नसक्दा आगामी २०७५ सालपछि प्राधिकरणले रु..
​सरकारी दुई निकाय मिल्न नसक्दा पश्चिम सेती आयोजना अगाडि बढेन
रमेश लम्साल काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्डबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । चिनियाँ लगानीकर्ता कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी..
​जलाशययुक्त आयोजना सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा
रमेश लम्साल काठमाडौँ । सरकारले बि सं २०८२ सम्म कुल दश हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसारको कार्ययोजना अगाडि सारेको छ। कुल उत्पादनको ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाबाट परिपूर्ति गर्ने र..
अबदेखि सरकारी कार्यालयहरुको टेण्डर एउटै अनलाईन मार्फत बुझाउनु पर्ने
काठमाडौँ । खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय तुल्याउन मुलुकमा पहिलोपटक एकल ‘पोर्टल’मा आधारित विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रारम्भ भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज यहाँ आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा..
​सरकारले बनाउन थालेका आयोजना समयमै नबन्दा, लोडसेडिङ नघट्ने
रमेश लम्साल काठमाडौँ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी अवधारणा अगाडि सारे पनि गत वर्ष मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्य सकारात्मक गतिविधि भने अगाडि बढ्न..
​पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको शिलान्यास, निर्माणका पक्षमा दलका नेताले के भने ?
पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्याससँगै यस क्षेत्रको विकासमा भरपर्दो आधार तयार भएको बताएका छन्। पोखराको छिनेडाँडामा निर्माण हुने विमानस्थलको बुधबार यहाँ शिलान्यास गर्दै उनले विकास निर्माणको..
ताल तलैयाको उपयोग गर्ने विषयमा बढेको विवादसँगै ठेक्काको काम अन्योलमा
धनगढी । ताल तलैयाको उपयोग गर्ने विषयमा बढेको विवादसँगै कैलालीको भजनी–त्रिशक्ति नगरपालिका कार्यालयद्वारा दिइएको तालको ठेक्काको काम अन्योलमा परेको छ । स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र नगरपालिका कार्यालयबीच नगर क्षेत्रमा..
​राहुघाट आयोजनालाई कम्पनी अवधारणामा अघि बढाउन प्रस्ताव, क्षमता ४० मेघावाट पुर्याउने
म्याग्दी । जिल्लामा निर्माण हुन लागेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनीको अवधारणामा अघि बढाउने प्रस्तावप्रति जिल्लावासी उत्साहित भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको आयोजनामा सर्वसाधारणको सेयर लगानी रहने प्रस्तावसहितको..
​आगामी पुसदेखि ७२ कि.मि. लामो बाहिरी चक्रपथको काम स्थलगत रुपमै सुरु हुने
काठमाडौँ । चालु आवभित्रमा उपत्यकाका तीनै जिल्लालाई जोड्ने बाहिरी चक्रपथको अध्ययन सकेर आगामी आवको मध्यबाट स्थलगत रुपमै काम सुरु हुने भएको छ । अव्यवस्थित रुपमा बढेको उपत्यकाको बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले..
८६ मेगावाटको सोलुखोला आयोजना निर्माणको तयारी, ३ वर्षमा सम्पन्न हुने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट प्रबद्र्धित साहस उर्जाले ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि तयारी तिब्र पारिएको जनाएको छ। शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न दोस्रो साधारण सभामा साहस उर्जाका अध्यक्ष हिम प्रसाद..
​चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ निर्माण अघि बढेन
रमेश लम्साल काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको चार महिना पूरा हुँन लाग्दासमेत चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। लेखा समितिले गत पुस..
Results 1098: You are at page 15 of 37